Ogadentoday Press » Faallo Kooban: Yaa caddowsan Qallin-ku dhiiglaha, Qori-ku dhiiglaha Iyo Waddaad Mooryaan
By Maxamed Khadar
Qallin-ku dhiigluhu waa nin dadku u yaqaanan innuu Jaamacad soo dhameeyay, Tolkiina ugu yeeraan Aqoonyahan. Waxaaba suuragal ah innuu ku soo baasay Qash, mahan shaqsi qalbi wanaagsan ama Rajo laga qabbo. Ummada oo dhan wuxuu u yaqaan Jaahil, waxaana waxbartay kaligii, Waxaa qallinkiisa uu ku duudsiyaa Dadkiisa, wuxuu ku xaqiraa Waddanigiisa wuxuuna isku dayaa innuu istimcaallo maskaxda Dadka isagoo u dhoola-cadeeya daacadna iska dhiga, waa afmiinshaar, qaarkood haddalba ma yaqaanan. Waa shaqsi isla weyn! Markuu Jaamacada dhiganayay wuxuu mar walba ku hamin jiray innuu noqdo Jaajuuso sidaas xil ku hello, wuxuuna dadka ku abaabulaa meel-cun-cun leh ku gayn, fahmaduna way ku yartahay!
Qori-Ku dhiiglahu waa labba nin mid aan waligii Iskuul ma galin iskana dhiga Siyaasi, Siyaasadda Jaajuus ku soo galay, qabiilkana wuu aamisan yahay. Midna waa askari reer Miyi ah oo qori loo dhiibay, wuu arkana wuu dillaa wuxuu arkana wuu samayn, wuxuu ka xishoon malahan! Maalinka u danbaysa lagu dangaadhana wuu baroortaa, tolayey annaa dadkii dhameyay ku waashaa! Sidan maanan I amoodaynin! Wax walba waxaa uga qiima baddan Xukunka, marmarna qof fiicaan iska dhigaa, si uu dadka u kasbaddo ninkuu is dhaho wuu ku fahmay, amma habeen madow gowric I ama wuu dharjin!
Waddaad Mooryaan waa qof suuradda uga eg waddaad, Kitaabkana aad ayuu u akhriyaa, Aayaha Quraanakana meel ka mareen bal adba sheeg, markuu doonaa Jahaaduu dadka dhahaa markuu doonaan Nabigaba Gaalada waa la heshiiyay dhahaa, habeen iyo maalinba wuxuu ku ducaystaa innuu lacag hello qof walba oo Siyaasi ama fursad uu ka helayana saaxiib la noqdaa, meeshu tagana naag iyo Caruur kaga cararaa, mabaadiidus ma ahan wax sal leh maalin meel lagu arkaa, Mar waa Daaci diintuu faafiya, Marna waa Waa siyaasi waxbuu qassaa, marna waa ganacsade lacag raadiyaa, Hadduu heli karanaa Dalka Iyo Dadkaba lacag siisan lahaa!